ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ | သွားလမ်းညွှန် Whiten ဖို့အကောင်းဆုံးလမ်းစဉ်
ကြှနျုပျတို့၏ site မှာ, ကျွန်ုပ်တို့၏ဧည့်သည်များ၏ privacy ကိုအကြှနျုပျတို့အားအစွန်းရောက်အရေးပါမှုသည်. ဒီသီးမူဝါဒကိုစာရွက်စာတမ်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏အမျိုးအစားများကိုလက်ခံရရှိနှင့်စုဆောင်းကြှနျုပျတို့၏ site အားဖြင့်၎င်း, ကအသုံးပြုသည်ကိုမည်သို့ဖြစ်ပါတယ်ဖော်ပြထားပါတယ်.
များစွာသောအခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များလိုပဲ, ကြှနျုပျတို့၏ site မှတ်တမ်းဖိုင်များကိုအသုံးပြု. ဃဖိုင်တွေအတွင်းမှသတင်းအချက်အလက်များကိုအင်တာနက်ပရိုတိုကောများပါဝင်သည် (အိုင်ပီ) လိပ်စာများ, ဘရောက်ဇာအမျိုးအစား, Internet Service Provider (ISP က), နေ့စွဲ / အချိန်တံဆိပ်ခေါင်း, ရည်ညွှန်း / ထွက်ပေါက်စာမကျြနှာ, နှင့်ကလစ်နှိပ်အရေအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်, ဆိုက်စီမံခန့်ခွဲ, ဆိုက်ပတ်ပတ်လည်လမ်းကြောင်းအသုံးပြုသူရဲ့လှုပ်ရှားမှု, လူဦးရေဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်း. IP လိပ်စာများ, နှင့်အခြားထိုကဲ့သို့သောသတင်းအချက်အလက်များပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသက်သေပြကြောင်းမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်စပ်ကြသည်မဟုတ်.
ကြှနျုပျတို့၏ site ဧည့်သည်ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်တွေကိုသိမ်းဆည်းဖို့ cookies တွေကိုကိုသုံးပါဘူး, သောစာမျက်နှာများကိုအသုံးပြုသူဝင်ရောက်ခွင့်သို့မဟုတ်ခရီးစဉ်အပေါ်စံချိန်အသုံးပြုသူ-တိကျတဲ့သတင်းအချက်အလက်, ဧည့်သည်ဘရောက်ဇာအမျိုးအစားဒါမှမဟုတ်ဧည့်သည်သူတို့၏ဘရောက်ဇာကနေတဆင့်ပို့ပေးကြောင်းအခြားသတင်းအချက်အလက်ပေါ်အခြေခံပြီးက Web page အကြောင်းအရာ customize.
Google က, တတိယပါတီရောင်းချသူအဖြစ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ပေါ်တွင်ကြော်ငြာဝတ်ပြုဖို့ cookies များကိုအသုံးပြုသည်.
အ DART cookie ကို Google ၏အသုံးပြုမှုကိုအငျတာနကျပျေါတှငျကြှနျုပျတို့၏ site များနှင့်အခြားဆိုက်များမှ၎င်းတို့၏ခရီးစဉ်အပေါ်အခြေခံပြီးအသုံးပြုသူများကြော်ငြာတွေအစေခံဖို့ကနေို.
အသုံးပြုသူများသည်အောက်ပါ URL ကိုမှာ Google ကကြော်ငြာနဲ့ content ကွန်ယက်ကို privacy ကိုမူဝါဒကိုလာရောက်လည်ပတ်ခြင်းအားဖြင့် DART cookie ကိုများအသုံးပြုခြင်းထဲကရွေးချယ်စေခြင်းငှါ – http://www.google.com/privacy_ads.html.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်သို့မဟုတ် Third-party ကြော်ငြာရှင်များကအသုံးပြုကြသည်ဤ cookies တွေကိုထိန်းချုပ်မရှိရှိပါတယ်.
သင်သည်သူတို့၏အလေ့အကျင့်အပေါ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်အချို့သောအလေ့အကျင့်များထွက်ရွေးချယ်ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းညွှန်ကြားချက်ဒီ Third-party ကြော်ငြာဆာဗာ၏သက်ဆိုင်ရာ privacy ကိုမူဝါဒများနှင့်တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ရဲ့ privacy ကိုမူဝါဒလျှောက်ထားပါဘူး, ကျွန်တော်များ၏လှုပ်ရှားမှုများကိုထိန်းချုပ်မနိုင်, ထိုကဲ့သို့သောအခြားကြော်ငြာရှင်များသို့မဟုတ်ဝဘ်က်ဘ်ဆိုက်များ.
သငျသညျ cookies တွေကို disable လိုပါက, သင်သည်သင်၏တစ်ဦးချင်းစီကို browser အတွက်ရွေးချယ်စရာများမှတဆင့်ဒါပြုစေခြင်းငှါ. တိကျတဲ့ကို web browser များနှင့်အတူ cookie ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအကြောင်းပိုမိုအသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်ကို browser ရဲ့သက်ဆိုင်ရာဝက်ဘ်ဆိုက်များမှာတွေ့နိုင်ပါသည်.